Caadi ah: Habraaca Cilmi-baarista Qoto-dheer ee Muujinaya Macaamiisha Dheer
Maalmahan, macaamiisha dhabta ah waxay raadiyaan heshiisyo toos ah iyo dalab qiimo dhimis ah, iyada oo aan wax khasaare ah ku keenin tayada iyo kalsoonida. Markaad bilowdo raadinta macluumaadka internetka, wax walbaa si toos ah ayuu u degaa. Waa ammaan in la yiraahdo raadinta qotodheer ee muhiimka ah waxay soo jiidan kartaa macaamiil badan oo badan. Taasi waa sababta oo ah, iyada oo leh, waxaad ka helaysaa fikrad ah waxa ay macaamiishaadu raadinayaan iyo sida loo soo bandhigo filashooyinkooda. Inkastoo ololaha raadinta ee raadinta ay tahay lagama maarmaan, cilmi-baaris caan ah oo qotodheer ah ayaa kaa caawin kara siyaabo badan - temp grain storage. Waxay u rogi kartaa martidaada macaamiisha waxayna gacan ka geysan kartaa kordhinta iibkaada inta badan.
Jason Adler, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Nafaqada , ayaa halkan kaga jira qodobo muhim ah oo lagaa doonayo inaad ku guulaysato hanaanka cilmi-baarista ee muhiimka ah
Evolution Keyword Evolution
Ugu horreyntii, waa inaad falanqeyntaa oo aad qiimeysaa ereyada muhiimka ah si aad u hubiso haddii ay fiicnaanayaan in la raaco ama aan la socon. Waxaa muhiim ah inaga oo dhan si aan u sameyno liisto ereyada muhiimka ah ee laga yaabo in ay khuseyso shaqadeena. Sida
Miyaad haysataa fikrad dadka dhageysta bartilmaameedka? Ogow dadka aad rabto in ay bartilmaamaan iyo goobahooda. Tusaale ahaan, haddii aad tahay blogger, qoraalada qoraaga Asians, markaa waxaa muuqata in dadka aad beegsaneyso ay ku noolaan doonaan India, Pakistan, China, Thailand, iyo waddamo kale oo la mid ah. SEO waa hab aad u wanaagsan oo aad ku ogaan karto cidda aad doonayso inaad bartilmaameedsato iyo sida loo isticmaalo ereyada muhiimka ah iyo odhaahda arrintan. Ka faa'iideyso talooyinka iyo jawaab celinta khabiirada oo baro sida macaamiishaadu uga jawaabi doonaan alaabtaada iyo adeegyada kala duwan.
Ka Baddel Qalabka Caadiga ah ee Aasaaska ah
Waa inaad ka baxdaa qalabyada muhiimka ah ee muhiimka ah si aad shaqo u hesho si sax ah. Waa khasab in aad jeceshahay qalab cilmi-baaris oo muhiim ah oo aad u isticmaasho barnaamijyo badan oo aad ku raadinayso ereyada muhiimka ah. Ma aha oo kaliya ereyada muhiimka ah laakiin kelmadaha iyo erayada ku haboon waa in loo adeegsadaa si aad shaqo u hesho. Waa inaadan marnaba ilaawin qalabyada aan caddayn ee kaa caawin kara inaad gaarto natiijooyinka la rabay todobaadyo gudahood. Tusaale ahaan, Demographics Pro ayaa loogu talagalay inay dadka siiso dareen ah cidda ay raadinayaan alaabtooda iyo sida loo helo macaamiisha saxda ah ee internetka. Waxaa jira waxyaabo badan oo qalab ah oo loo isticmaali karo in lagu qabto dad badan oo dad ah. Qalabkani wuxuu kugula socodsiiyay jidka saxda ah, waxaadna si fudud u bartilmaameed kartaa erayada iyo ereyada muhiimka ah ee macaamiishaada ay xiiseynayaan.